Home Wararka (XOG) Rooble, Deni & Axmed Madoobe oo diiday in Midowga Murashaxiinta kaalin...
(XOG) Rooble, Deni & Axmed Madoobe oo diiday in Midowga Murashaxiinta kaalin laga siiyo shirka
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo looga hadlayo dhameystirka Doorashooyinka dalka, raadinta dhaqaalaha ku baxaya, diyaarinta Habraaca Doorashada Golaha Shacabka iyo Qodobo kale.
Midowga Murashaxiinta oo isku dayay in kaalin laga siiyo shirka si ay kaalin mug leh uga yeeshaan aayo ka tashiga iyo geeddi socodka Doorashooyinka. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aya MOL u sheegay in Rooble oo ka biyo diiday codsigii Midowga Musharixiinta ee ahaa inay ka qeyb galaan shirka kadib markii ay ka hor-yimaadeen qaaar ka tirsan madaxda Maamul Goboleedyada dalka.
Xogta ayaa sidoo kale sheegeysa in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ay sidoo kale diideen in Midowga Musharixiinta kaalin laga siiyo shirka.
Wararka ayaa sheegay in Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ay aad uga xumaadeen war-murtiyeedkii dhawaan ay midowga musharixiinta uga hor yimaadeen doorashadii Aqalka Sare ee ka dhacday maamul Goboleedyada.